BAL EEG: Macquul ma tahay in Shaxda Bayern Munich ay sidan u Muuqato kaddib imaatinka Coutinho iyo Perisic!!? – Gool FM
(Bayern) 22 Agoosto 2019. Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa daabacay shaxda cajiibka ah kooxda Bayern Munich ee la filayo inay ku shartagto xilli ciyaareedkan 2019/2020, kaddib markii ay Bavarian-ka la soo saxiixatay xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho.
Bayern Munich ayaa xaqiijisay inay kula wareegtay laacibkii khadka dhexe ee kooxda Barcelona Philippe Coutinho heshiis hal xili ciyaareed oo amaah ah oo ay dhiibeen 8.5 milyan oo euro, iyagoo dooq u ahaysta inay 120 milyan oo euro ku wada iibsadaan xagaaga soo socda.
Kooxda reer Germany ee Bayern Munich ayaa ka sameysay suuqan xagaaga heshiisyo muhiim ah, gaar ahaan xiddigaha kala ah Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Philippe Coutinho iyo Ivan Perišić.
Tababaraha reer Croatia ee Niko Kovač ayaa wuxuu ugu yaraan heystaa hadda shaxda ugu fiican ee dhamaan boosaska kala duwan ay kooxda ka kooban tahay, wuxuuna u dagaalami karaan dhamaan tartamada kala duwan ay qeybta ka yihiin xili ciyaareedkan, marka loo eego tayada xiddigaha ay haatah heysato Bayern.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa daabacday shaxda la filayo inay ku shartagto la filayo inay ku shartagto xilli ciyaareedkan 2019/2020, kaddib imaatinka xilli ciyaareedkan 2019/2020.
Haddaba halka hoose kaga boggo shaxdan oo dhameystiran:
Goolhaaye: Manuel Neuer.
Daafac: Kimmich, Süle, Lucas Hernandez, David Alaba.
Khadka dhexe: Javi Martínez, Thiago Alcântara, Philippe Coutinho.
Dhanka weerarka: Gnabry, Robert Lewandowski, Ivan Perišić.